အီကြာအော် ● “ကွီးဖွတ်၊ ကွီးအော်နှင့် ခက်သေးရွာမှ အာဖျံကွီးများ” | MoeMaKa Burmese News & Media
ရန်လိုကျွဲ - အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဘာလုပ်မလဲ
မောင်လူရေး - လေဥကာကွယ်ရေး အမိန့်တော်မြတ်
"ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဟတ်ချိုး၊ ဒီမိုမယ်တော်ကြီး နှင့် ရွာဦးဘုရားမှ ခရိုနီလဒကြီးများ"
ရန်လိုကျွဲ - ဓာတုဗေဒ ဒုက္ခသီရိ
အီကြာအော် ● “ကွီးဖွတ်၊ ကွီးအော်နှင့် ခက်သေးရွာမှ အာဖျံကွီးများ”
(မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၇၊ ၂၀၁၆
ခက်သေးရွာလယ်ကောင်တွင် နှပ်တွဲလောင်းဖြင့် ဖိနပ်မပါ ကစားနေကြသော ကြွက်နီတို့ ကလေးတသိုက်က ဆိုင်ကယ်မောင်း၍ ရွာလမ်းအတိုင်း ဆိုက်ပေးကာဝင်လာသော ဖွတ်လေးကို ဝိုင်း၍ အားပေးနေကြလေသည်။
ဖွတ်ကလေးအား ကလေးအုပ်ကြီးက ဝိုင်းနေလေ၏။
ကလေးများကို ကျပ် ၁၀၀၀ တန်တရွက်စီ ပေးလိုက်သောအခါ ကြွက်နီတို့ကလေးတသိုက် ဝမ်းသာအားရယူပြီး ပြေးထွက်သွားကြလေတော့သည်။
“ဟေး…၊ ဒါမှ ကျော်တို့ ကွီးဖွတ်ကွ”
ခက်သေးရွာတွင်ကား ယုန်ကန်ရပ်ကွက်ခေါင်းချုပ်“ကွီးဖျိုး”ကို ခေါ်တွင်ရာမှ “ကွီး” ဆိုသော ဖွဘုတ်စကားကား ရေပန်းစား လေသည်။ ခက်သေးရွာ၏ ထုံးစံအတိုင်း သူများ ကွီး၍ ကိုယ်လိုက်ကွီးသောသူများကား များလှပေသည်။ ခက်သေးရွာ တရွာလုံး ဟိုနား “ကွီး” ဒီနား “ကွီး” နှင့် မကွီးသူ ခေတ်မမီသလို ဖြစ်နေပေသည်။
“ဟေ့ကောင် ကွီးဖွတ်…၊ ဟာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ..၊ ဖွတ်ကလေး…၊ မင်းကလည်း သူများ“ကွီး”လို့ ကိုယ် “ကွီး” လုပ်ရရင် ပျော်နေတာပဲ မဟုတ်လား”
”ဟေ့ကောင် ဖွတ်ကလေး…၊ ငါ့ကို တော့ လာမကွီးစမ်းပါနဲ့ကွာ၊ စိတ်ပျက်တယ်…၊ ကွီးအော်မဟုတ်ပဲ….သူများတွေက ခွီးအော်ဆိုရင် ခွေးအော်သလို ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွ…”
ပြောမည့်သာပြောရသည်။ ခက်သေးရွာတရွာလုံး လူတကာ ကွီးကြသောခေတ်တွင် သူ့ကိုလည်း ကွီးသဖြင့် ခက်သေးရွာ သားပြီပြီ ကျေနပ်သလိုတော့ စိတ်ကလေးက ဖြစ်သွားရသည်။
“ငါတို့ခေတ်တုန်းက “အာဖျံကွီး” ဆိုတာ နာမည်ကြီးကွ၊ မင်းတို့ ကွီးဖျိုးထက် နာမည်ကြီးတယ်”
အီကြာအော်က သူ၏အကြိုက် ဇာတ်ကောင် “အာဖျံကွီး”ကို သတိတရဖြင့် ပြောလိုက်လေ၏။
“အဲဒါဆို ဆရာအော်တို့ခေတ်ကတည်းက ကွီးခဲ့တာကိုး”
“အေးပေါ့က၊ တို့က ကွီးခဲ့တာ အနှစ် ၄၀ လေက်တောင် ရှိခဲ့ပေါ့”
ခက်သေးရွာသားတို့၏ ဆရာကြီးလုပ်တတ်သောအကျင့် မင်း ငယ်ပါသေးတယ်ကွာ ဟူသောဂိုက်ဖြင့် အီကြာအော်က ပြောလိုက်လေသည်။
“သူက ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ နေခဲ့တာလဲ”
ဖွတ်ကလေးက မယုံတယုံဖြင့် အီကြာအော်ကို မေးလိုက်လေသည်။
“ယုန်ကန် ရပ်ကွက်မှာပဲပေါ့ကွ၊ အာဖျံကွီးခေတ်စားတုန်းက မင်းတို့ ကွီးဖျိုးတောင် နှပ်တွဲလောင်းပဲ ရှိဦးမယ်၊”
အီကြာအော်က ခက်သေးရွာသားများ၏ ထုံးစံအတိုင်း မင်းတို့ ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုသော လေသံဖြင့် ရွှီးလိုက်လေသည်။
ဖွတ်ကလေးက မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်ဖြင့် “ဟုတ်လား” ဟု မေးလိုက်သည်။
“ဒါနဲ့…ဖွတ်ကလေးရေ…၊ မင်းကြည့်ရတာ ရက် ၁၀၀ မတိုင်ခင်ကနဲ့ မတူတော့ဘူး၊ ထောင်ထောင် ထောင်ထောင် ဖြစ်နေတယ်”
“ကွီးဖျိုးတို့၏ ခက်သေးရွာ “ကြက်ညှာရက်တရာ စီမံကိန်း” အသံကြားကာစက ဖွတ်ကလေးတယောက် အသံမထွက်တော့။ ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးရုံပေါက် အစောင့်လုပ်သော ဖွတ်ကလေးခမျာ ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းကြောင့် စားပေါက်ပိတ်ပါပြီဆိုကာ တမှိုင်မှိုင် ဖြစ်လိုက်သေးသည် မဟုတ်ပါလား။
“ဒါကတော့ ဆရာအော်ကလည်း၊ အပေါ်က ဆီးသီးဗန်းတွေမှောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ရှုပ်နေ ကြတာကိုး၊ အောက်ခြေမှာတော့ ဒုံရင်းပါပဲ၊ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲပေါ့”
“မင်းတို့ကတော့ ခို နေမြဲ၊ ဖွတ်နေမြဲပေါ့ကွာ ဖွတ်ကလေးရာ၊ မဟုတ်ဘူးလား”
ဘယ်အစိုးရလက်ထက်ဖြစ်ဖြစ် “တက်သမျှရွာလူကြီး တို့အဘ၊ တို့ကွီးကွီး” လုပ်ပြီး ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေသော ခိုနီတို့လို ကြောင်ပါးများကို ကြည့်မရသော လေသံဖြင့် အီကြာအော်က အငေါ်တူးလိုက်လေသည်။ ဘပြောင်တို့ခေတ်က ”အဘ၊ အဘ” ဖြင့် တဘတည်း ဘနေခဲ့ကြသော ခိုနီတို့တသိုက်ကား အမေပုတို့ ခေတ်တွင် “တကွီးကွီး” ဖြစ်နေပေတော့သည်။
“ဟ…မင်းကိုကြည့်ရတာလည်း တော်တော်လေးကို ကွီးခံထားရပုံပါလားဖွတ်ကလေးရဲ့ …”
မပေးစဘူး ကြွက်နီတို့ကို မုန့်ဖိုးပေးသော ဖွတ်ကလေး၏ ဒီဇိုင်နာနေကာမျက်မှန်နှင့် တီရှပ်အသစ်တို့်ကိုကြည့်ပြီး အီကြာအော်က မှတ်ချက်ချလိုက်လေသည်။
“အခု ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးအလကားမရတော့လို့ ကျုပ်လည်း ထုံးစံအတိုင်း ဆေး အဝယ်တော် တာဝန်ယူရတယ်လေ ဆရာအော်ရဲ့ ”
ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးရုံအစောင့် တာဝန်ထမ်းရင်း လူနာများကို ဆေးဝါး စားစရာ များကို ဝယ်ပေးရခြင်းဟူသော အလုပ်ကို ဝံကြီးတပါးလုပ်ရသည့် ပုံစံမျိုးချီုးကာ ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားစွာဖြင့် ဖွတ်ကလေးက အီကြာအော်ကို ပြောလိုက်လေသည်။
“လူနာတွေက ဘယ်ရမလည်း ကျုပ်ကို လာပြီး ကွီးရတာပေါ့…၊ ကွီးဖွတ်ဆို ယုန်ကန် ဆေးရုံမှာ အကုန်ပြီးတယ်လေ….ဟဲ ဟဲ ဟဲ”
ခက်သေးရွာ၏ဓလေ့အတိုင်း ရွာသားဝန်ထမ်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတခုရလျှင် လုပ်စားကြ ရပြီး ရွာသားများကလည်း စိတ်ထည်းက အဆဲမျိုးပေါင်းစုံးဖြင့် ဆဲချင်သော်လည်း အပေါ်ယံမှာကား ဖော်လန်ဖားရပေသည်။
ဘပြောင်တို့ဆင်း၍ အမေပုတို့ပါတီက ခက်သေးရွာ အာဏာပိုင်ဖြစ်လာသော်လည်း ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီးတွင်မူကား အောက်ခြေတွင် အော်နေကြမြဲ ဖြစ်သည်။ ဘပြောင်တို့ ရွာလူကြီးများအလုပ်မှ မနားခင်က ခါတော်မီလုပ်သွားသော ဆေးအလကားပေးကိစ္စများကို အမေပုတို့က ဖြေရှင်းပေးနေရသည် မဟုတ်ပါလား။
“အေးပါကွာ…၊ မင်းလည်း ကွီးနိုင်တုန်း ကွီးလိုက်ဦးပေါ့…”
“တနေ့က ခိုနီတောင် မငြီးစဘူး လာငြီးနေတယ်”
“ယုန်ကန်ရွာလယ်ကောင်က အထပ်မြင့်တွေဆောက်တာ ကွီးဖျိုးတို့က ရပ်ထားလို့ ဒီကောင် ခိုငြီး ငြီးနေတာလေ”
“သူဌေးတွေက ငြီးတာရှိသေးလား ဆရာအော်”
“သူတို့က ပိုငြီးတတ်တယ်လေကွာ..၊ ခိုဆိုတော့လည်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ငြီးသပေါ့”
“ယုန်ကန်ခိုတွေ သူဌေးတွေထိတာ ကောင်းတာပေါ့ ဆရာအော်”
“သူဌေးသင်္ဘောမှောက်တာ ကိစ္စ မရှိဘူးကွ..၊ သူတောင်းစား ခွက်ပျောက်တော့ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့”
“ဘယ်က သူတောင်းစားက ခွက်ပျောက်သွားတာလဲဗျ”
ဖွတ်ကလေးက အီကြာအော်၏စကားကို နားမလည်၍ ခေါင်းကုပ်ပြီး မေးလိုက်လေသည်။
“ဟကောင်ရ…၊ သူတောင်းစား ခွက်ပျောက်ဆိုတာ သာမာန်ဆင်းရဲသား လက်လုပ် လက်စားတွေ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွေတွေ ရပ်သွားတော့ ဝင်ငွေမရှိ၊ စားစရာ မရှိတာကို တင်စားပြီး ပြောတာကွ”
ထိုစဉ်အခါတွင် မီးဖိုချောင်မှ ထွက်လာသော ဒေါ်အွန်မေးက…
“ကိုအော်…၊ ရှင်တို့ “ကွီးတွေ ကွက်တွေ…. ခွီးတွေ ခွက်တွေ…. လုပ်မနေနဲ့ဦး၊ ဆောက်လုပ်ရေးတွေ ရပ်ရပ်၊ မရပ်ရပ်…. တော့ ဗိုက်ပူပူက ရပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခု ရွာမှာမိုးတွင်း ရေကြီးလို့ ဆန်တွေ ဆီတွေ ပြတ်လိမ့်မယ်၊ အိမ်မှာလည်း သိပ်မရှိတော့ဘူး၊ ကိုခိုနီ့ဆိုင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း အကြွေးသွားဆွဲပေးပါဦး”
ထိုအခါတွင် အီကြာအော်လည်း စိတ်ထဲမှ “ဘာမှမဆိုင်ပဲ ငါ့ဗိုက်ပဲ လာတိုက်ခိုက်နေတယ်” ဟုတွေးကာ ပါးစပ်မှ…
“အေးပါကွာ…၊ငါ သွားလိုက်ပါ့မယ်” ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
ဖွတ်ကလေးလည်း သူ့ဆရာ အီကြာအော်တယောက် ထုံးစံအတိုင်း အခြေအနေမဟန် တော့သည်ကိုသဘောပေါက် သည်ကြောင့် “ဆရာကွီး..အဲ ဆရာအော်ရေ…၊ကျုပ် အလုပ်ကလေးရှိလို့ သွားလိုက်ပါဦးမယ်” ဟု ဆိုကာ သူလည်း မာလကွီးသွားနိုင်သည်ဟုတွေးမိ၍ ခက်သေးရွာလယ်ကောင်သို့ အမြန်ဂျောင်း လေတော့သတည်း။ ။
အီကြာအော် – “ဖွတ်ကလေး၊ အီကြာအော်နှင့် အဖာတရာ ခက်သေးရွာ” (0)
အီကြာအော် ● ဖွတ်ကလေး၊ အီကြာအော်၊ နှုတ်ပိတ်ခြင်းနှင့် ခီလင်းဆရာတော် (0)
အီကြာအော် – ဖွတ်ကလေး၊ အီကြာအော်နှင့် ခက်သေးရွာ သမဒဂျီးလဲပွဲ (0)
အီကြာအော် – ဖွတ်ကလေး၊ ခက်သေးရက်တရာ ကြက်ညှာနှင့် ကွမ်းအမှိုက်များ (0)
အီကြာအော် – “ဖွတ်ကလေးနှင့် ခက်သေးရွာတွင် ပီအာနှိုက်ခြင်း” (0)